फ्रन्टलाइनर डा. अर्चना भन्छिन्, ‘बिरामी निको भएर घर फर्किदा सबै पीडा भुलिन्छ’ - SatyaPatrika
२०७८ जेष्ठ १९, बुधबार प्रकाशित
औषधी उपकरणको अभावका बीच रातदिन कोभिड–१९ बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु लामो ड्युटी र निरन्तर खटाइका कारण ग्यास्ट्रिकदेखि डिप्रेसनसम्मको शिकार हुनुपरेको छ । बिरामीको उपचारमा खटिँदा स्वास्थ्यकर्मीले आफन्तसँग महिनौं टाढिनुपर्ने अवस्था छ । कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा खटिएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीको पीडा उस्तै छ ।
जस्तो पीडा डा. अर्चना कार्कीको छ । १६ बैशाखदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले साविकको कटकुवा स्वास्थ्यचौकीलाई नगर कोभिड अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा ल्याएपछि उनले अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । अक्सिजनसहितको २५ बेड अस्पताल संचालनमा आएपछि उनको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन् ।
उपचारमा सकस ‘करिब १५-२० दिन अगाडिको कुरा हो । सिकिस्त बिरामीहरु धेरै आउथेँ । सबै बिरामीलाई अक्सिजनको आश्वयक परेपछि पु¥याउनै धौ–धौ भयो । तर, निषेधाज्ञापछि बिरामीको पनि चाप घटेको छ,’ हालैको एकदिन डा. कार्कीले भनिन्, ‘पहिले–पहिले कोभिड–१९ पोजेटिभ भएका बिरामीहरुमा सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोको मात्रै लक्षण हुन्थ्यो । तर, अहिले ज्वरो, पखलाजस्ता कडा खालका लक्षण भएका बिरामी आउँछन् ।’
सामान्य औषधीले अहिलेको कोभिड–१९ जित्न मुस्किल रहेको अनुभव उनले सुनाइन् । सय जना बिरामीमध्ये झण्डै ८५ जनालाई २४ सै घण्टा अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ । एकै पटक धेरै बिरामीलाई अक्सिजन चाहिने भएकाले मुख्य समस्या नै सिलिण्डर र अक्सिजनको जोहो गर्नु रहेको छ । ‘अक्सिजनकै अभावले मृत्युदर बढेको मलाई महसुस हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको पनि रेसियो मिलेको छैन ।’
अन्य अस्पतालको तुलनामा वीरेन्द्रनगरको नगर कोभिड अस्पतालमा बिरामी र स्वाथ्यकर्मीको पनि रेसियो मिलेको छ । ड्युटीमा एकजना डाक्टरसहित तीन जना कर्मचारी नियमित भएकाले २५ जना बिरामीलाई हेर्न खासै अप्ठ्यारो नभएको डा. कार्की बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी बीचमा कुरा भइरहेको हुन्छ । उपचारमा खटिरहँदा बिरामीसँग राम्रो चिनजान भइसकेको हुन्छ । त्यसैले बिरामी डिस्चार्ज हुनेबेलासम्म पारिवारिक सम्बन्ध भइसकेको हुन्छ ।’ गम्भीर बिरामी उपचार पश्चात जब निको भएर फर्किन्छन्, डा. कार्कीसँगै उनको टिम हर्षविभोर हुन्छ ।
शान्ति समाजले गर्याे वीरन्द्रनगर नगरपालिका लाइ स्वास्थ्य सामाग्री हस्तातन्तरण
१२ कक्षा सम्म पाठ्यपुस्तक निःशुल्क